Ny fampiharana famolavolana sary tsara indrindra efatra ho an'ny Android | Androidsis
Ny famolavolana sary dia fifehezana izay mahaliana ny mpampiasa bebe kokoa eran'izao tontolo izao. Noho io antony io dia maro ny olona mitady fomba hahafahana mampihatra na mampivelatra azy matetika kokoa. Ny findaintsika Android manokana dia manome antsika io fahafaha-manao io koa. Izao dia manana isika misy fampiharana azo ampiharina sy hianarana bebe kokoa momba ny famolavolana sary.
Noho izany, raha liana amin'ity famaizana ity ianao, Ireto fampiharana Android manaraka izay hasehonay anao ireto dia azo antoka fa hahaliana anao. Satria misaotra azy ireo ianao dia afaka mampihatra ny fahalalanao ny famolavolana sary amin'ny fomba tsotra amin'ny findainao.
Na matihanina ianao na mianatra, azo antoka fa hanampy na ilaina amin'ny tranga maro ireo rindranasa ireo. Inona koa, Izy rehetra dia azo sintonina mora foana ao amin'ny Play Store. Fampiharana inona avy no nahavita an'io lisitra io?
2 Adobe drawator draw
Ity fampiharana voalohany ao amin'ny lisitra ity dia a fomba tsara hijanonana hatrany amin'ny vanim-potoana amin'ny fironana. Hatramin'io dia navoaka ny asan'ny mpampiasa erak'izao tontolo izao. Zavatra manampy anao hahita izay iasan'izy ireo amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Ankoatry ny loharanom-tsindrimandry tsara rehefa mamolavola ny tetikasanao manokana. Satria afaka mamorona ny rindrinao manokana amin'ny aingam-panahy ianao. Ka tsy isalasalana fa fampiharana tsara izy io raha mitady hevitra na mpiara-miasa mety ho avy ianao amin'ny ho avy. Azontsika atao koa ny manaraka ny olona mampakatra tetikasa ao amin'ilay fampiharana.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ankoatr'izay, ao anatiny dia tsy misy fividianana na dokam-barotra isan-karazany.
Behance - Portofolio mamorona
Fampiharana an'ny Adobe suite no miandry antsika amin'ny laharana faharoa. Misaotra an'ity rindranasa ity dia afaka mamorona sary sy sarisary manokana amin'ny fomba tsotra ianao. Azontsika atao ny mamorona endrika miaraka amin'ireo volo ao amin'ilay fampiharana. Ho fanampin'ny fahafahany mamorona sary miaraka amina sary samihafa. Izay rehetra inoanao amin'ny fampiharana dia tianao afaka manondrana miasa amin'ny rindranasa hafa na amin'ny solosainao. Safidy tsara izany rehefa manomboka zavatra, na raha manana fotoana aingam-panahy lehibe ianao. Famolavolana tsara, izay mamela ihany koa ny fampiasana tena ahazoana aina.
Ny endritsoratra an-tsoratra ampiasainay dia lafiny iray tena ilaina. Ka, tena ilaina tokoa ny fananana rindranasa ahafahantsika mahazo loharano maro samihafa. Satria manome antsika fahafaha-manao betsaka izy io amin'ny fampivoarana ny asantsika amin'ny sehatry ny endrika sary. Ity fampiharana ity dia ohatra tsara amin'izany. Manana loharano maro izahay Azontsika atao koa ny misintona amin'ny findaintsika ary avy eo mampiasa azy ireo amin'ny programa famolavolana na fanovana. Ho fanampin'ny fahafahana mampiasa azy ireo koa amin'ny telefaona Android. Safidy tsara raha te hanana loharano maro ianao.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita doka ao anaty fampiharana aza izahay.
Mifarana amin'ny iray amin'ireo fampiharana malaza sy malaza indrindra amin'ity sehatra ity. Izy io dia tonian-dahatsoratra am-paosy izay hamela antsika hanatanteraka ireo hetsika fanovana sary fototra sy lehibe indrindra avy amin'ny telefaona miaraka amin'ny fiononana feno. Azontsika ampiasaina amin'ny fampiharana izany, ankoatry ny fahalalana ny fanovana sary haingana kokoa. Raha vantany vao vita ny famerenanay sary iray, azontsika atao ny mizara azy amin'ny tambajotra na amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ireo mpifanerasera aminay. Mpanonta sary tsara, izay miasa ho famenon'ny Photoshop tena izy amin'ny solosainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana endrika sary tsara indrindra ho an'ny Android
Herberth Navarijo dia hoy izy:
ary multilayer raha ny fijeriko dia iray amin'ireo mitovy indrindra amin'ny photoshop ho an'ny pc
Valiny tamin'i Herberth Navarijo